Mas’uuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda Madaxweyne Biixi Oo La Kulmay Madaxda Xisbiga WADDANI Ee Gobolka Sool | Hangool News
Mas’uuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda Madaxweyne Biixi Oo La Kulmay Madaxda Xisbiga WADDANI Ee Gobolka Sool
June 19, 2018 - Written by Hangool News 1
La-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Bulshada iyo weftigii xukuumadda ee uu hoggaaminayey ayaa shalay Huteelka Mustaqbal ee magaalada Laascaanood kulan kula yeeshay masuuliyiinta heer gobol ee xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI.
Siday werisay wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA, waxa shirkaas oo ay martiqaadkiisa lahaayeen Masuuliyiinta xisbiga WADDANI ee Gobolka Sool lagaga xaajooday sidii wadajir loogu difaaci lahaa qaranimada Somaliland isla markaana la iskaga kaashan lahaa adkaynta nabadgelyada gobolka Sool.
Guddoomiyaha Gobolka Sool ee xisbiga WADDANI, Cabdi Yuusuf Jaamac (Cabdi- ma Jabe) oo ka hadlay shirkaas ayaa sheegay in aanu kulankaasi ahayn mid la xidhiidhay siyaasad iyo xisbiyo, hase ahaatee ay ka wada hadleen weftiga xukuumadda sidii wadajir looga hawlgeli lahaa difaacida qaranimada Somaliland iyo sidii danaha iyo horumarka gobolka Sool la iskaga kaashan lahaa.
La taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada Md. Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo masuuuliyiinta xisbiga WADDANI martiqaadka iyo kulanka wada tashiga ah ee ay ku falanqeeyeen sidii meel looga soo wada jeedi lahaa ilaalinta nabadgelyada iyo in si isku mid ah looga hortago codowga Somaliland kaga soo duula dhinaca dibadda.
La-taliyaha Madaxweynaha ee arrimaha bulshadu wuxuu shirkaas ka caddeeyey in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoggaamintiisa ay ka mid tahay wada-tashiga uu sida joogtada ah ula yeesho madaxda xisbiyada iyo daneeyeyaasha maxaliga ah ee Somaliland.
Mudane Cabdi-waaxid wuxuu u mahadceliyey madaxda xisbiga WADDANI ee gobolka Sool, oo uu tilmaamay inay isku waafaqeen danaha qaranka Somaliland